PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-17 - Kuyancomeka okwenziwa ngufadlu
Kuyancomeka okwenziwa ngufadlu
Ilanga langeSonto - 2017-09-17 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
UYANCOMEKA umsebenzi ka-fadlu Davids ongumqeqeshi wemaritzburg United okuyisizini yakhe yokuqala eqashwe ngokugcwele njengomqeqeshi oyinhloko.
Abaqeqeshi abaningi bajwayele ukushaya udaka uma besafika ekilabhini bavike ngokuthi basabumba kabusha ikilabhu. Udavids usekhombise kaningi ukuthi unolwazi olujulile ngonobhutshuzwayo. Njalo uma ebanjiswa izintambo ububonakala ngokushesha umehluko kwiteam of Choice abengumgadli wayo phambilini.
Lo mqeqeshi uthathe lo msebenzi kuroger De Sa omhlule ingcaca.
Udavids akumthathanga isikhathi eside ukulungisa umonakalo omkhulu obudalwe ngude Sa kule kilabhu eholwa ngufarook Kadodia. Kuthusile ukuthi udavids uqhube le kilabhu waze wayifaka kwi-top 8 okuyenze yadlala kwimtn8 kule sizini.
Udavids uqhubekile nomsebenzi omuhle wangesizini edlule njengoba eqhube le kilabhu yangena kuma-semi Final EMTN8 abakhishwe kuyona yisupersport United ngeledlule.
Akuyona into encane ukuthi iteam of Choice ikhiphe imamelodi Sundowns kulo mqhudelwano ekuhambeni.
Le kilabhu isayibambe ngakho nasemidlalweni ye-absa Premiership njengoba isithole amaphuzu ayisishiyagalombili emidlalweni emine. Iyinqobe yomibili imidlalo yokuvula isizini yase idlala ngokulingana kwemibili yakamuva. Ngolwesihlanu ithole iphuzu ibhekene ne-orlando Pirates eharry Gwala. Yize luselude ukhalo kodwa kumqoka ukuthi anconywe udavids ngomsebenzi omuhle awenzayo. Omunye umuntu osekhombise kaningi ukuthi akafuniseli ngomsebenzi wakhe ngumilutin “Micho” Sredojevic waseserbia ololonga ibucs.
Lo mqeqeshi wethulwe sekusele kancane ukuba kuqale isizini kodwa usekwazile ukuletha uzinzo kule kilabhu.
Ufike waqunga isibindi waqhelisa kwasani ebhentshini walanda urulani Mokwena obengumsizi kapitso Mosimane ololonga imamelodi Sundowns.
Lo mqeqeshi kuthiwa ukubeke kwacaca ukuthi akafuni kube khona isikhulu sekilabhu esigxambuleka emsebenzini wakhe. Phela kwibucs kuwumkhuba osujwayelekile ukuthi abaqeqeshi babalise ngokuthathelwa yizikhulu ezithile izinqumo.
Ukjell Jonevret wasesweden ukhale isililo esifanayo ngemuva kokuhlukana nale kilabhu. Uthe ubeqala emlandweni ukusebenza ekilabhini enokugxambukela emsebenzini womqeqeshi.
Umicho akalokhu ebika izaba zokuthi usanda kufika kule kilabhu njengoba ebukeka eyibambe ngakho.
Le kilabhu kayikehlulwa selokhu kuqale isizini njengoba ihlule ichippa United ngo-1-0 yabambana nebaroka kuba ngu-11 yase ihlula i-ajax Cape Town ngo-1-0 njengoba idlale ngokulingana neteam of Choice kuba ngu0-0 ngolwesihlanu.
Omunye umqeqeshi ikakhuluka- zi kwabakuleli ngabe usalokhu ebalisa ngokuthi yima esazama ukugxilisa isitayela sakhe kubadlali. Indlela enza ngayo umicho iyakhombisa ukuthi abaqeqeshi baphesheya kwezilwandle bahleleke kangcono kakhulu kunabakuleli.
Umqeqeshi osezingeni eliphezulu uyakwazi ukusebenza ngabadlali bezinga eliphansi bamnqobele izinkomishi.
Ngikhumbula ngoba ustuart Baxter ushiye kwikaizer Chiefs inqobe i-absa Premiership NEMTN 8 yize ebenabadlali abambalwa bezinga eliphezulu. Nokho-ke kangithandi ukungena ngigxile ekutheni usteve Komphela ongene ezicathulweni zikabaxter uya-hluleka ukusebenzisa abadlali anabo ukunqobela le kilabhu izinkomishi.